Aparitak’i Shina Ho Amin’ireo Mpahao Hetsi-panoherana Ny Orinasa Manodina PX ao Shanghai Ny Polisy Sy Ny Mpanivana Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Jolay 2015 1:51 GMT
Hetsi-panoherana ny PX tao Shanghai ny 26 Jona. Sary avy amin'i @wickedonnaa mpampiasa Twitter
An'aliny maro ireo mponina tao Jinshan ao amin'ny distrikan'i Shanghai no nidina an'arabe nandritra ny herinandro, nanomboka ny 22 Jona, mba hanohitra ny drafitry ny governemanta hamindra toerana ny orinasa iray mpanodina paraxylene (PX) ho any amin'ny manodidina azy ireo.
Noravan'ny polisy nitàm-piadiana ny vahoaka tamin'iny faran'ny herinandro lasa iny ary notereny ireo voasambotra mba hanasonia “antoka” iray hoe tsy hanao hetsi-panoherana hanohitra ny PX indray. Nasian'ireo Shinoa manampahefana teritery ihany koa ny fahafahana miditra aterineto ary nodioviny tao amin'ny media sosialy izay vaovao momba ireo hetsi-panoherana.
Miaraka amin'ny hevitra hampidirana ny indostria mpanodina solika sy vokatra simika, nofaritana i Jinshan ho toy ny toerana tena mety hamindràna toerana ireo orinasa mpamokatra simika avy amin'ny faritra rehetra ao Shanghai. Ho fanomanana ilay drafitra vaovao ho famaritana ny faritra, izay ny famindràna toerana ny Gaoqiao mpanadio solika miorina ao Pudong ho any Jinshan no mety hanombohana azy, nampanao dingana fanadihadiana ny ho fiantraikany amin'ny tontolo iainana ireo manampahefana, izay dingana ofisialy farany atao amin'ny fampidirana ilay drafitra.
Tany aloha tany, nisy hetsi-panoherana marobe tany amin'ireo tanàn-dehibe toa an'i Dalian, Kunming sy Xiamen hanoherana ny fanorenana ireo orinasa mpanodina ny PX. Mampanahy ireo mponina eny an-toerana ny ho fahalotoan'ny rivotra iainany ateraky ny paraxylene, ireo vokatra azo avy amin'ny fanadiovan-tsolika ary ireo fampiasa mahazatra amin'ny famokarana tavoahangy plastika sy fibra izay mitondra poizina ho an'ny olombelona.
Ho fampangatsiahana ny hatezeram-bahoaka, navoakan'ny governemanta ny fanambaràna iray tao amin'ny Weibo, media sosialy shinoa iray malaza tamin'ny 26 Jona, mitaky ny hampiatoana ny fanadihadiana ara-tontolo iainana momba ilay tolokevitra famindràna toerana. Betsaka ireo sorabaventy “fampitsaharana-ny-ady” hita teny an'arabe, voalaza ho napetraky ny governemanta, milaza hoe:
Natsahatra ny fanadihadiana ara-tontolo iainana. Nosintonina ilay tetikasa fampidirana. Aza midina an-dalambe.
Tapa-kevitra ny hampitsahatra ilay tetkasa, an'aliny maro ireo olona mbola nifamory teny an-dalambe nandritry ny faran'ny herinandro. Asehon'ny lahatsary YouTube eto ambany ny hetsi-panoherana tamin'ny faran'ny herinandro :
Hatreto, tsy misy tatitra momba ireo hetsi-panoherana lavareny nandritry ny herinandro mihitsy any anatin'ireo filazàm-baovao goavana ao amin'ny tanibe Shina ary nofafàna avokoa hatramin'ny 23 Jona ny fitantaràn'ireo nanatri-maso an'ireo hetsi-panoherana ireo tao amin'ny Weibo, toy ny Twitter ho an'ny Shinoa. Ny hany loharanom-baovao sisa tavela dia ny avy amin'ireo tranonkala sy sehatry ny media sosialy mpanohitra monina any ivelany. Nanaraka akaiky ny vaovao i @wickedonnaa ary nitatitra tao amin'ny Twitter hoe voasivana ny vaovao ao amin'ny media sosialy shinoa hatramin'ny nanombohan'ireo hetsi-panoherana. Ireto ambany ireto ny sary avy amin'ny famoriam-bahoaka tamin'ny 26 Jona, talohan'ny nanombohan'ny bemidina nataon'ny polisy mitam-piadiana tamin'ilay fihaonana :
26 Jona, an'aliny maro ireo olona tao amin'ny distrikan'i Jinshan ao Shanghai tamin'ny andro fahadimin'ireo hetsi-panoherana nitohitohy nanoherana ny tetikasa PX. Andinindininy ato: http: //t.co/socrnalBwZ
Iray amin'ireny tranonkalam-baovao ireny ny NTDTV, nampiresaka maro tamin'ireo mpanao hetsi-panoherana momba ny famoretana nataon'ny polisy tamin'ny 29 Jona. Hoy ny lehilahy iray antsoina hoe Shum :
Misy fifamoriana isan-kalina, olona manodidina ny 30.000 sy 40.000 no eny an'arabe. Tamin'ny Sabotsy, nosamborin-dry zareo izay nandeha tany afovoan-tanàna. Ny lehiben'ny polisin'ny distrikan'i Jinshan no nitarika ny raharaha tamin'ny fivelesana ny olona, ny polisy manampahefana sasany aza mbola henjankenjana kokoa noho izany. Natsahatr'izy ireo ny fiasan'ny zotra faha-22 amin'ny fiaran-dalamby ambanin'ny tany ary nosavain'ireo polisy mpandrindra fifamoivoizana ireo olona tany anaty fiara fitaterana teny amin'ireo arabe migodàna. Vantany vao hitan-dry zareo fa avy any Jinshan ianao dia alainy. Nobahanana ny aterineto. Iray minitra aorian'ny nampakarana azy dia manjavona ny sary.
Nie, olona iray hafa mpanao hetsi-panoherana, niresaka momba ny toe-draharaha ny 27 Jona:
Polisy nitam-piadiana niisa 2.000 narahana fiara 19 teo ho eo no nanakana ireo mpanao hetsi-panoherana tsy hiditra ny afovoan-tanàna [avy any amin'ireo arabe sy làlambe migodana]. Nila nampiseho karatra ny olona rehefa handray ireo fiaran-dalamby haingam-pandeha, ny fiaran-dalamby ambanin'ny tany ary ireo fitateram-bahoaka. Nosakanana tsy hiditra tao an-tanàna ireo rehetra mponina avy any Jinshan. Tato anatin'ny telo andro lasa, nanomboka tamin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 11 ora, sy 5 ora hariva hatramin'ny 11 alina, nofeperana ny fahafahana miditra aterineto tao amin'ny distrikan'i Jinshan. Ny finday 4G lasa 2G.
Namerina nandefa sary avy ao amin'ny Weibo momba ny famoriam-bahoaka tamin'ny 28 Jona i @wickedonnaa :
28 Jona, andro fahafito nanoherana ny PX tao Shanghai. An'aliny ireo nanjohy ilay famoriam-bahoaka.
Mety hampihisatra kely ny hetsi-panoherana ny ny PX mandritry ny fotoana voafaritra ireo famoretana an-kerisetra ataon'ny polisy, saingy raha toa i Shanghai, tanàna lehibe ao Shina ho an'ny resaka fikirakiràna vokatra simika avy amin'ny solika, ka tsy mampiato ny fanitarana io karazana indostria iray io, dia hiverina indray ny fifandonana, hoy ny lahatsoratra iray avy amin'ny bilaogy shinoa Letscorp.net nanamafy :
Shanghai no lasa tanàna lehibe ho an'ny indostrian'ny fanodinana simika avy amin'ny solika ho an'i Shina. Mahazo tombony ireo orinasa, mahazo fidiran-ketra ny governemanta, raha ireo vahoaka tsotra kosa tsy afaka mahita loatra fahafahana manana asa nefa tsy maintsy miaritra fahalotoana henjana be.
Azo antoka fa hisafidy ny tontolo iainana fa tsy ny asa ireo mponin'i Shanghai ankehitrio ary tofoka tanteraka amin'ny indostria mpanodina vokatra simika azo avy amin'ny solika. Tsy maintsy manao safidy ny governemanta ao Shanghai, na ny fidiran-ketrany, na ny fiveloman'ny olona.